USeth Godin Akulungile Ngezinombolo
NgoMgqibelo, Novemba 16, 2013 NgeSonto, Novemba 17, 2013 Douglas Karr
Ngenkathi ngifunda okuthunyelwe kwebhulogi kusayithi, ngathola isilinganiso esivela kuSeth Godin. Kwakungekho ukuxhumana nokuthunyelwe, ngakho-ke kwakudingeka ngikuqinisekise ngedwa. Impela, uSeth wayeshilo: Imibuzo esiyibuzayo ishintsha into esiyenzayo. Izinhlangano ezingenzi lutho kodwa ezilinganisa izinombolo azivamile ukudala impumelelo. Izinombolo ezingcono nje. Ngimhlonipha kakhulu uSeth futhi ngingumnikazi weningi le-
Eminyakeni embalwa edlule, ngayeka ukufuna abalandeli nabalandeli. Angiqondile ukuthi ukusho ukuthi bengingafuni ukuqhubeka nokuthola okulandelayo, ngiqonde ukuthi ngayeka ukubuka. Ngiyekile ukulungiswa ngezepolitiki online. Ngayeka ukugwema izingxabano. Ngayeka ukuzibamba lapho nginombono oqinile. Ngaqala ukuthembeka ezinkolelweni zami futhi ngagxila ekunikezeni inani kunethiwekhi yami. Lokhu akuzange kwenzeke nje ngezenhlalo yami
NgoLwesine, ngoMashi 28, 2013 Douglas Karr
Ngicabanga ukuthi abathengisi abaningi kakhulu babheka ithonya lomphakathi njengokungathi luhlobo oluthile lwezinto ezintsha. Angikholwa ukuthi kunjalo. Ezinsukwini zokuqala zethelevishini, sasisebenzisa umphathi wezindaba noma umlingisi ukuphonsa izinto kubalaleli. Amanethiwekhi amathathu ayengawabalaleli futhi kwakukhona ukwethembana negunya elisunguliwe… ngakho umkhakha wokukhangisa wezohwebo wazalwa. Ngenkathi imithombo yezokuxhumana ihlinzeka ngezindlela ezimbili zokuxhumana, abagqugquzeli bezindaba zenhlalo basekhona
NgeSonto, Septhemba 26, 2010 NgoMsombuluko, Ephreli 20, 2015 Douglas Karr
Kule minyaka eyishumi edlule, ngisebenze ngokungakhathali ukwakha okulandelayo online, igunya, futhi ekugcineni ibhizinisi elichumayo. Manje, ngibhekene nabantu abafisa ukuqasha izinsizakalo zami ukuze nami ngibasize benze okufanayo. Ngezinye izikhathi kuba yinkampani enkulu enethalente elihle futhi ngiyakwazi ukuletha. Kwesinye isikhathi akunjalo futhi nginikeza insizakalo ehlukile. Kuyo yonke le minyaka, ngibuke abanye bedlula i-inthanethi futhi ngafunda i-
Amathiphu Amabili Aphuthelwe nguSeth Kuzinhlolovo
NgeSonto, ngoFebhuwari 15, 2009 ISonto, May 29, 2016 Douglas Karr
UNicki ubhale ku-Twitter ngokuthunyelwe kukaSeth Godin: Izeluleko Ezihlanu Zocwaningo. Ngicabanga ukuthi uSeth uphuthelwe izeluleko ezibalulekile ezimbalwa: Okokuqala, ngicela ungawahloli amakhasimende akho ngaphandle kokuthi uzimisele ukwenza okuthile ngemiphumela. Okwesibili, ngincoma yonke inqubo yocwaningo eqala ngombuzo owodwa, "Ungasikisela?" Njengoba uSeth esho kokuthunyelwe kwakhe, ukubuza umbuzo owodwa kungaguqula izimpendulo zomuntu kusethi elandelayo yemibuzo. Ngangihlala ngincoma ukuthumela lokhu okukodwa